Ikhosi yeBlender-IsiXeko kunye nemodeli yokuma komhlaba-iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi yeBlender-IsiXeko kunye nemodeli yokuma komhlaba
Ngale khosi, abafundi baya kufunda ukusebenzisa zonke izixhobo zokumodareyitha izinto kwi-3D, ngeBlender. Enye yezona nkqubo zibalaseleyo zomnqamlezo simahla kunye neenkqubo zomthombo ovulekileyo, ezenzelwe ukumodareyitha, ukunikezela, oopopayi kunye nokuveliswa kwedatha ye3D. Ngokusebenzisa ujongano olulula uya kuba nakho ukufumana ulwazi oluyimfuneko lokujongana neeprojekthi zoyilo zokuqala ze-3D. Yenziwe nge-9 yethiyori kunye nezifundo ezithathu ezisebenzayo, apho iprojekthi yokugqibela inokuveliswa kunye nesixeko esibonelelwa kusetyenziswa imephu yokwenyani ye-OSM.
Ngenisa idatha kwi-OpenStreetMap ukuya kwi-Blender
Ukulinganisa izixeko kunye nomphezulu kwiBlender
Uyilo loyilo kunye nobunjineli
Iikhosi-3D Modeling Iikhosi-zeGeospatial Iikhosi-LandWorks Izifundo zeBlender
UFlori Izuno uthi:
Prsh, ndiza kuba nomdla kwi-nje nje kurs ne-Blender, ju lutem me ktheni nje prgjigje?